Fanambarana ny finoana - S sabatra sy sabatra
HomeFanambarana ny finoana
Ireo boky enina amby enimpolo amin'ny Testamenta Taloha sy Vaovao dia mirakitra ny Tenin'Andriamanitra ara-tsindrimandry ary tsy misy hadisoana ao amin'ireo asa soratra tany am-boalohany. Ny Baiboly dia fanambarana feno an-tsoratra nataon'Andriamanitra ho famonjena ny olona ary fahefana farany momba ny fiainana sy finoana kristiana.
Misy Andriamanitra mandrakizay tsy voafetra, misy mandrakizay ao amin'ny olona telo, ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina (Deot. 6: 4; Isa. 43:10; Jaona 1: 1; Asan’ny Apostoly 5: 4; Efes. 4: 6). Ireo telo ireo dia tsy tanjona tokana fa iray ihany koa.
Jesosy Kristy dia miseho eo amin'ny nofo Andriamanitra (1 Tim. 3: 16), dia nateraky ny virijina (Mat. 1: 23), nitarika fiainana tsy nanota (Heb. 4: 15), voavoky ny ota tamin'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana (Rom. 5: 10-11; 1 Kor. 15: 3; 1 Pet. 2:24) ary nitsangana indray tamin'ny vatana tamin'ny andro fahatelo (1 Cor. 15: 1-3). Satria velona Izy, Izy irery no Mpisoronabe sy mpisolovava antsika (Heb. 7: 28).
Ny asan'ny Fanahy Masina dia ny hanomezam-boninahitra an'i Jesosy Kristy Tompo. Ny Fanahy Masina dia manameloka ny ota, manangana indray, tsy mitoetra, mitari-dalana ary manome torolàlana, ary koa manome hery ny mpino ny fiainana velona sy ny fanompoana an'Andriamanitra (Asan’ny Apostoly 13: 2; Rom. 8:16; 1 Kor.2: 10; 3:16; 2 Pet.1: 20, 21). Ny Fanahy Masina dia tsy hanohitra velively izay efa nambaran'Andriamanitra Ray.
Manota ny olombelona rehetra (Romana 3:23; Efes. 2: 1-3; 1 Jaona 1: 8,10). Izany toe-javatra izany dia mahatonga ny tsy hahazoana ny fisandratany amin'ny alàlan'ny asa tsara. Ny asa tsara anefa dia vokatra entin'ny famonjena ny finoana fa tsy takiana voavonjy aloha (Efesiana 2: 8-10; Jakoba 2: 14-20).
Ny olona dia voavonjy amin'ny fahasoavana amin'ny alàlan'ny finoana irery an'i Jesosy Kristy (Jaona 6:47; Gal.2: 16; Efes. 2: 8-9; Titosy 3: 5). Ny mpino dia nohamarinina amin'ny rany nalatsaka ary hovonjena amin'ny fahatezerana amin'ny alalany (Jaona 3:36; 1 Jaona 1: 9).
Tsy fandaminana ny fiangonan'i Kristy, fa vatan'ny mpino izay nahatsapa ny toetrany very ary nametraka ny fitokisany tamin'ny asa fanavotan'i Kristy ho famonjena azy ireo (Efes. 2: 19-22).
Jesosy hiverina indray ho an'ny Teniny (1 Thess. 4: 16). Ny mpino marina rehetra dia hiara-manjaka aminy mandrakizay (2 Tim. 2: 12). Izy ho Andriamanitsika, ho olony (2 Cor. 6: 16).
Hisy ny fitsanganan'ny maty amin'ny marina sy ny tsy marina; ny marina ho amin'ny fiainana mandrakizay, ny tsy marina ho fanamelohana mandrakizay (Jaona 5: 25-29; 1 Kor. 15:42; Apok. 20: 11-15).